Owesifazane ubulawelwe imali yesondlo sezingane e-KZN | News24
Owesifazane ubulawelwe imali yesondlo sezingane e-KZN
Mthobisi Sithle, ILANGA
Durban - Usababaza isihluku umphakathi waseMfekayi, eMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal, emuva kokutholakala kwesidumbu sowesifazane ngaphansi kombhede sisongwe ngengubo kanti kusolwa isoka lakhe ngalokhu.
UNkosingiphile Gumede, 22, wakhona eMfekayi, kuthiwa uthathwe yisoka lakhe elinguZakhe Khumalo, 34, ngoMgqibelo odlule baya kubo (kwesoka) nalo ngelakhona eMtubatuba.
Kuthiwa uGumede ubulawa nje, bekunokungezwani kahle phakathi kwakhe noKhumalo kubangwa ukuthi akazondli izingane zabo ezintathu.
Nokho kakwaziwa ukuthi indaba isuswe yini ngosuku abulawe ngalo ngaphandle nje komdonsiswano wesondlo. Kuthiwa uKhumalo uzivumele phambi komphakathi obugcwele emzini okutholakale kuwona isidumbu ngoLwesithathu olwedlule wathi uGumede umdlise umuthi wamagundane ngoba ecasukile.
OLUNYE UDABA:Kutholakale owesimame eshonile embhedeni nosana ngaphansi kombhede
Isidumbu sithathwe ngalo usuku lwesigameko sayohlolwa njengoba kukhona nezinsolo zokuthi uGumede uklinyiwe. Uyise kaGumede uThomas Ngema, uthi ayikho ingxabano yakamuva ayaziyo phakathi kwengane yakhe noKhumalo.
Uveze ukuthi ufisa nokufa ngenxa yobuhlungu abuzwile kubulawa indodakazi yakhe.
"Lo mfana kuthiwa ubefika njalo kwami ngezikhathi zakusihlwa, athathe ingane yami ahambe nayo kuthi uma umkami ekhuluma, amlwise. Kukaningi ngizama ukuhlangana naye lo mfana engibalekela kanti inhloso zakhe ngezokuba angizwise ubuhlungu emhlabeni," kusho uNgema.
Uthi indodakazi yakhe ibibikile kunina ngesikhathi ihamba, yathi isayolanda imali yokuthengela abantwana izimpahla zokugqoka kubo kaKhumalo.
ILANGA lithole ukuthi uGumede ubatshelile nabangani bakhe bakomakhelwane ukuthi uma kwenzeka edlula emhlabeni kuyobe ubulewe yisoka lakhe ngoba kababoni ngasolinye.
Kuthiwa uKhumalo ubelala endlini naso isidumbu singaphansi kombhede.
Umthombo weLANGA osondelene nalolu daba, uthi kuhlatshwe umkhosi emuva kokunyamalala kukaGumede kwazise isoka lakhe beliphika lithi kalimazi.
"Kuphunyiwe kwabhekwa yonke indawo kwaze kwangenwa nasendlini yalo mfana. Kuzwakale iphunga elingelihle endlini saphakamisa umbhede kwavela isidumbu sesithanda ukonakala," kusho umthombo.
Umphakathi waseMtuubatuba ukhuza ibhadi uthi kayikaze yenzeke into efana nalena endaweni.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt-Colonel Thulani Zwane, usiqinisekisile isigameko wathi umsolwa uboshiwe.
UKhumalo uvelile enNkantolo yeMantshi yaKwaMsane ngoLwesihlanu. Kwenzeka lokhu nje, kukhalwa nkalo zonke ngokubulawa kwabantu besifazane eNingizimu Afrika.